Caddaankii Qaar Baa Waalli Ku Dhiftay
USA, 17 Nov 2012 (Alldhooftinle.com)
Sidii Isaaqa loo wada xanaaq! Obamaa la doortay aa! Caddaankii Qaar baa Waalli ku dhiftay. Gobolka Texas ee Maraykanka Caddaanka raba iney goostaan ayaa weli is diiwaan gelinaya.
Tan intii ay dhacday doorashadii Maraykanke ee Obama ku guuleeystay waxaa soo baxayey sida cadaanka Maraykanka uga xun yihiin Obama doorashadiisa. Isla habeenkii la shaaciyey natiijada doorashada ayaa odayga xagjirka ah ee Bill O'reilly wuxuu ka soo muuqday TVga cunsuriga ah ee Fox News.
Bill O'reilly wuxuuna ku calaacalay in Yamyam iyo Qadaadweyn ay isugu tegeen musharixii cadaanka ee Mitt Romney. Wuxuu qarin kari waayey in Cadaanku aanay hadda wixii ka danbeeya majoorati ahayn, oo marka ay is biirsadaan madowga, Isbaanishka iyo Aasiyaanku ay legdi karaan musharaxa cadaanka ah.
Holly Solomon, Ninkeedii ayey gaadhi marisay
Waxaase taas ka sii daran oo ku tusaysa sida cadaanku uga firgadeen doorashada Obama markii haweeney la yiraahdo holly Solomon oo 28 jir ay ka cadhootay markii ninkeedu diidey inuu u codeeyo Romney, sidaa darteed intay cadhootay ay ninkeedii gaadhi ku eryatay ilaa dusha ka marisay. Markii la qabtay ee la weydiiyeyna waxay sheegtay inuu ninkeedu sabab u ahaa in Obama ku guuleeysto doorashada maadaama uu diidey inuu u codeeyo Romney.
Hadaba iyadoo ay badan yihiin wararka ku saabsan wayaabihii dhacay doorashadii Obama ka dib, Hadana tan ugu muhiimsani waa gobolka Texas oo buuxiyey arji uu ku doonayo inuu kaga go'o dalka Maraykanka. Dadka ku saxeexan arjigaa oo maalin walba sii kordhaya ayaa ilaa hada waxaa ku saxeexan 112,000 qof.
Dadkaa is diiwaan geliyey inkastoo ay tiradaasi yar tahay marka loo eego dadka reer Texas oo 26 milyan tiradoodu tahay, hadana waxay muujinaysaa sida doorashadii Obama ay uga xanaajisay cadaanka.
Texas oo ah goboladii koonfurta ee lagaga adkaaday dagaalkii sokeeye ee Maraykanka, isla markaana caan ku ah midabkala sooca ayaa xitaa hadii ay aqlabiyad ku doortaan inay go'aan hadana aanay weli howl yaraaneyn, ilaa dowlada dhexe ansaxiso.
Iyadoo la wada sugayo waxa ka soo bixi doona doorashada Scotland, lagana yaabo inay ka go'do Ingiriiska ayaa Mareekankuna hadda bilaabeen inay ka hadlaan goosasho waxaana muuqata in figradaha gooni isu taagu ay ku soo badanayaan reer galbeedka iyadoo weliba si xawli ah isu soo taraysa.
Yaasiin Maamuud Aljacfari